भूकम्पपीडित भूमिहीन- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
मंसिर २२, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
हेटौंडा — मकवानपुरमा २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपीडितमध्ये १ हजार ८ सय ८१ परिवार भूमिहीन छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मनहरी, बाग्मती र बकैया गाउँपालिकामा गरेर १ हजार ८ सय ८१ लाभग्राहीको भूमिहीन भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना इकाई कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला पुनर्निर्माण सहजीकरण समितिको बिहीबार बसेका बैठकमा भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना इकाई मकवानपुरका प्रमुख सोमराज तिमल्सिनाले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
हेटाैंडा उपमहानगरपालिका र ३ गाउँपालिकामा भूकम्पपीडित लाभग्राहीहरू भूमिहीन रहेको प्रमुख तिमल्सिनाले बताए । उनका अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा ५ सय २७ जना, बकैया गाउँपालिकामा ७ सय ९६, बाग्मती गाउँपालिकामा ३५ जना र मनहरी गाउँपालिकामा ५ सय २३ जना भूमिहीन लाभग्राही रहेका छन् ।
मकवानपुरमा भूकम्पपीडित लाभग्राही ३३ हजार ९ सय ७४ को संख्या पहिचान भएको छ । तीमध्ये हालसम्म २६ हजार ३ सय ३२ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । जिल्लामा अझै पनि ७ हजार ६ सय ४२ जनासँग अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । सम्झौता हुन नसकेकामध्ये एक हजार ८ सय ८१ लाभग्राहीहरू भूमिहीन छन् ।
भूकम्प पुनर्निर्माणअन्तर्गत निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ मंसिरमा मात्रै १ सय ११ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यसैगरी, १ सय ७८ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता, २ सय ८० जना तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।
जिल्लामा ८५ हजार १ सय ८८ परिवारको सर्वेक्षण भएकोमा हालसम्म गुनासो फछर्याैटबाट थप भएका गरी ३३ हजार ९ सय ७४ लाभग्राही पहिचान भएका छन् । जसमध्ये हालसम्म २६ हजार २ सय २१ जनाले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् । २५ हजार ३ सय ८२ जनाले पहिलो किस्ता, १८ हजार १ सय ७० जनाले दोस्रो तथा ११ हजार ४ सय ८६ जनाले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् ।
यसैगरी दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिने तथा प्रमाणीकरण भएका लाभग्राही १८ हजार ४ सय ४ जना, तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिने एवं प्रमाणीकरण गरिएका लाभग्राहीहरू १२ हजार २ सय १३ जना रहेको जानकारी दिइएको छ । जिल्लामा घर निर्माण सुरु गरेका भूकम्प पुनर्निर्माण लाभग्राही संख्या १९ हजार ३ सय २९ रहेको कार्यालय प्रमुख तिमल्सिनाले बताए ।
जिल्लामा हालसम्म ११ हजार ६ सय ३५ लाभग्राही प्रबलीकरणका लागि पहिचान भएका छन् । जसमध्ये २ सय २२ सहित हालसम्म ३ हजार ८ सय ३४ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको छ । अझै पनि जिल्लामा प्रबलीकरण गर्नुपर्ने ७ हजार ८ सय १ जना लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । प्रबलीकरणतर्फ पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही ३ हजार ३ सय ८५ रहेका छन् ।
जिल्लामा १० जना लाभग्राहीले हालसम्म अनुदान रकम फिर्ता गरेको र जिल्लामा जोखिमयुक्त घरधुरी संख्या २५ पहिचान भएकोमा १० जनाको अन्यत्र जग्गा खरिद गरेर स्थानान्तरण गरेको इकाई प्रमुख तिमल्सिनाले भने ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख एवं सहजीकरण समितिका संयोजक रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा संघीय सांसद एवं अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले ऐलानी जग्गा मात्र भएका लाभग्राहीलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा सहजीकरण समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख खुलालले केन्द्रबाटै पहल गरेर गाँठो फुकाउन संघीय सांसद दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । प्रकाशित : मंसिर २२, २०७५ ०७:३८
स्त्री शक्तिमा समर्पित किम्फ
काठमाडौँ — सेताम्मे हिउँ र जब्बर चट्टान हिमालको पहिचान । तर, जब यसलाई मान्छेसँग जोडिन्छ, हिमाल सपना र चाहनाको प्रतिक बनिदिन्छ । मान्छेले आफ्ना चाहना पूरा गर्न हिमालसँग कस्तो सम्बन्ध गाँसेका छन् ?
राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पवर्तीय फिल्म फेस्टिभल (किम्फ) को १६ औं संस्करण उद्घाटन गर्दै (बायाँबाट) पहिलो महिला माउन्टेन गाइड दावा याङजुम शेर्पा, गायिका आनी छोइङ डोल्मा, पहिलो महिला टेम्पु चालक लक्ष्मी शर्मा, जेनिफर पिडोम र तबलावादक सरिता मिश्र । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर
यसलाई पहिले कुन रूपमा पुजिन्थ्यो अनि अहिले कसरी हिमाल रंगमञ्च बनिरहेको छ ? यी प्रश्नका जवाफ ‘माउन्टेन’ डकुमेन्ट्रीमा समेटिएका छन् ।
‘जब सहरहरू निर्माण भए हामीले सुख–सुविधा हासिल गर्न थाल्यौं,’ फिल्ममा भनिएको छ, ‘त्यसपछि हामीलाई खतरा महसुस गर्न मन लाग्यो । हामी हिमालतिर गयौं । हामी पैसा तिरेर खतरा हासिल गर्न थाल्यौं । यही क्रममा हिमाल मानव विलासीको रंगमञ्च बन्न थाल्यो ।’ सहर–बजारको कृत्रिमतामा हराएका मान्छेलाई हिमालले नै प्रकृतितर्फ फर्काएको कुरा फिल्ममा उल्लेख छ । अर्केस्ट्रा संगीतको उतार–चढावमा दृश्य दौडाइएका छन्, यो औधी सुन्दर लाग्छ ।
हिमाललाई जिउँदो पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको यही डकुमेन्ट्री शुक्रबार काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पवर्तीय फिल्म फेस्टिभल (किम्फ) को १६ औं संस्करणको उद्घाटन फिल्मका रूपमा प्रदर्शन गरिएको थियो । निर्देशक जेनिफर पिडमले ‘माउन्टेन’ लाई कवितात्मक फिल्म भन्न रुचाइन् । उनले यसअघि पनि ‘शेर्पा’, ‘मिराकल अन एभरेस्ट’ जस्ता डकुमेन्ट्री बनाएकी थिइन् । स्त्री शक्तिको सम्मानका रूपमा किम्फले यसपालि ‘वुमेन मुभ माउन्टेन्स’ थिम आत्मसात् गरेको छ ।
महिला निर्देशकले हिमाली कथामा बनाएको डकुमेन्ट्री देखाउनुअघि किम्फ आयोजकले पाँच महिलामार्फत फेस्टिभल उद्घाटन गराएको थियो । गायिका आनी छोइङ डोल्मा, पहिलो महिला माउन्टेन गाइड दावा याङजुम शेर्पा, पहिलो महिला टेम्पु ड्राइभर लक्ष्मी शर्मा र तबलावादक सरिता मिश्रले किम्फको ट्यागलाइन उल्लेखित ब्यानर देखाएर फेस्टिभल उद्घाटन गरे । फिल्ममार्फत आफूले धेरै ज्ञान बटुल्ने गरेको गायिका आनी छोइङले बताइन् ।
बीचका केही वर्ष कुमारी हलमा फेस्टिभल सञ्चालन गरे पनि किम्फ यसपालि पुरानै भेन्यु अर्थात् राष्ट्रिय सभागृह र नेपाल पर्यटन बोर्डमा फर्किएको छ । साथै, काठमाडौं महानगरपालिका सहआयोजकका रूपमा आबद्ध हुँदा आर्थिक भार कम भएको फेस्टिभल निर्देशक रम्यता लिम्बूले बताइन् । ‘हामीलाई घर फर्केजस्तो भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा उपस्थित कामपाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले चाहिँ यस्ता काममा सहकार्य बढाउँदै लग्ने वाचा गरे ।
शाक्यले फेस्टिभलमा आएका विदेशी फिल्मकर्मीलाई फुर्सद मिले उपत्यका डुल्न पनि अनुरोध गरे । यहाँका विश्व सम्पदा नियाल्न उनले सुझाव दिएका थिए । काठमाडौं जस्तो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सहरमा पाहुनालाई स्वागत व्यक्त गर्दै उनले थपे, ‘हिमालका कारण नेपाल चर्चित छ । हिमालको थप अध्ययन गरेर विश्वभर यसबारे ज्ञान फिजाउन सकिन्छ ।’ किम्फले विश्वका विविध संस्कृति र भूगोल जान्ने अवसर प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो ।
फेस्टिभल अध्यक्ष वसन्त थापाले महानगरपालिकासँगको सहकार्य महत्त्वपूर्ण र आवश्यक रहेको बताए । उनले फेस्टिभलमा ७० भन्दा बढी फिल्म समावेश गरिएको जानकारीसमेत दिए । तिनले दर्शकलाई मोहित गर्ने उनको भनाइ थियो ।
फेस्टिभलको पहिलो दिन ‘डोल्पा डायरी’, ‘मोक्ष’, ‘आरजे रिपर’, ‘स्मल कार्निभोरस इन इस्टर्न नेपाल’, ‘अ रोड’, ‘एन अनसर्टेन विन्टर’, ‘नोट्स फ्रम द वाल’ लगायत फिल्म प्रदर्शन गरिएका थिए । शनिबारको सूचीमा ‘नाम्लो’, ‘सुपरमंक’, ‘कथा ७२’, ‘मी भर्सेस माइन’, ‘अ ल्यान्ड सेप्ड बाई विमेन’, ‘इस्केप’ जस्ता फिल्म समाविष्ट छन् ।
प्रकाशित : मंसिर २२, २०७५ ०७:३२